मधेशवादी दल अब पनि गुल्टिए भने उँभो लाग्न मुस्किल पर्नेछ - Ujyaalo Nepal
कोरोना संक्रमण बढेपछि दिल्लीमा निशेधाज्ञा जारी
भारतीय बजारबाट सोझै विद्युत् खरिद गर्न प्राधिकरणले पायो स्वीकृति
माथिल्लो तामाकोशीको काममा ढिलासुस्ती गर्नेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री
कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालगञ्जका विद्यालय एक साता बन्द
थप ४९० जनामा कोरोना संक्रमण, पाँचको मृत्यु
मधेशवादी दल अब पनि गुल्टिए भने उँभो लाग्न मुस्किल पर्नेछ
By ujyaalo	 On २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१९ 91
मधेशवादी नेताहरू र दलहरूले आफ्नो अस्तित्व राख्न र देशको जिम्मा लिन सक्ने नेतृत्व क्षमता कहिले आर्जन गर्ने होलान् ? कि अरूसँग अधिकार मागेरै अरूले खुवाईदिने लक्षका लागि काम गर्दै आएका हुन् ? कामरेड ओलीले अध्यादेशको एउटा झटारो फाले पछि कुईकुई गर्दै समाजवादी र जनता पार्टी एकिकरण भएर जसपा बनेको हो । अहिले सत्ताको टुक्रा देखिएपछि अहिले एकिकरण भालुको कन्पारो भईसकेको छ । मधेशवादी नेताहरू एकले अर्कोलाई सहन्नन्, आफू मात्र अघि लाग्न खोज्छन् । यसरी सधैँ ससाना स्वार्थमा पनि तिन बल्ड्याङ् खान खोजेपछि मधेशी जनता सधैँ अल्मलिनु बाहेक अरू के लाभ होला र ! हुन त मधेशी जनतालाई सधैँ अल्मलाउनु पनि कम्ताको लाभदायी कर्म हुँदैन ! स्टेट्सम्यानसीप खै ?
म त प्रष्ट भन्छु– जसपाले नै नेतृत्व गरेर सरकार बनाओस्, त्यो राष्ट्रिय ल्याकत र नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित गरोस् । कसैको खटनमा काम गरेर लुकाउने तिगडम नगरोस्, जनताले सबै बुझिरहेका छन्। मधेशवादी दल अब गुल्टियो भने उँभो लाग्न मुस्किल पर्नेछ ।
नयाँ सरकार बनाउने, नबनाउने कुरामा रेशम चौधरी कुनै मुद्दा हैन र हुन सक्दैन। दुईवटा अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा रेशमलाई प्रम ओलीले छाड्न सक्दैनन्। यदि सरकारलाई छाड्न सक्ने कुनै उपाय छ भने मधेशवादी दल आफैं सरकारमा पुगेर छाडे भयो ।
संकटमा नै नेताको रियल क्षमता देखिने हो । सामान्य अवस्थामा त स्यालले पनि मजाले राजकाज चलाउन सक्छ । जनतालाई अल्मलाउने काम गर्न बन्द गरौँ । प्रष्ट भएर लोकतान्त्रिक संस्कार देखाऔँ, छलकपटलाई सीमा नाघ्न नदिऔँ ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०३:१९
गणतन्त्र संस्थागत गर्न नगरी नहुने काम !
माथिल्लो तामाकोशीको काममा ढिलासुस्ती गर्नेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छः…